Fanodikodinam-bokatra Starbucks: Maninona raha kaody kaody? | Martech Zone
Fanodikodinam-bokatra Starbucks: Maninona raha kaody kaody?
Alakamisy, Aogositra 31, 2006 Alakamisy, Aogositra 31, 2006 Douglas Karr
Seth ny bilaogy dia manana fanamarihana momba ny snafu coupon tsy dia raisina tsara ao amin'ny Starbucks. Raha jerena ny haben'ny Starbuck dia tsy azoko hoe maninona izy ireo no tsy nanisy paikady coupon tamina barcoding. Teknolojia somary tsotra sy tsy lafo ity… ity dia mila fanamarinana ao amin'ny solo-sainin'ny Point of Service fotsiny.
Ahoana no anaovanao izany? Ny ankamaroan'ny mpivarotra rindrambaiko mailaka dia mamela ny Substitution Strings (raha tsy manao izany dia mifindra any ExactTarget). Midika izany fa afaka mandefa tadin-dàlana mora foana ianao amin'ny lalan'ny sary. Ny kofehy nolavina tamin'ny fotoana nanokafana ny mailaka dia manangana ny kaody bara, ka afaka mametaka karazana kaody coupon mora foana i Starbucks - miavaka amin'ny mpamandrika iray - ary mamoaka azy ho kaody barcode.
Rehefa voavotra dia azon'ny mpamatsy vola atao ny manara-maso ny mailaka misy ny kaody bara. Ny soatoavina dia jerena ao anatin'ny rafitra ary avy eo voamarina ny maha-azo itokiana SY fanavotana. Ankoatr'izay, ny fanavotana ny tapakila dia azo soratana amin'ny adiresy mailaka tena izy - manome ny Marketer fampahalalana sarobidy momba izay nanavotra ny tapakila, naharitra hafiriana, izay nanavotany azy sns. Fampahalalana azo antoka fa ho loharano lehibe eo an-dàlana!
Miaraka amin'ny teknolojia tsy misy talantalana sy ny drafitra tsotra sasantsasany, afaka namonjy ny tenany ilay henatra i Starbucks.
Tsy paikady ny tahotra
Bilaogy sy voninkazo: voa, ahi-dratsy, mandoto ary maniry
31 Aogositra 2006 à 8:55
Tsara ny hevitrao. Manontany tena aho hoe inona no nataon'ny IT ry zalahy Starbuck?